Saturday November 13, 2021 - 11:35:55
waa sawirka ISAIAS AFWERKI
Dowladda Mareykanka ayaa markale ku dhawaaqday in ay cunaqabateymo kusoo rogtay hoggaanka xisbiga talada haya ee dalka Eritrea iyo saraakiisha ugu sarraysa ciidamada wadankaasi.
Amar cusub oo uu soo saaray Joe Biden madaxweynaha Mareykanka ayaa dhigaya in xayiraad lagusoo rogo ciidanka Eritrea ee loo yaqaan EDF iyo Jabhadda shacbiga dimuquraadiga oo ah xisbigada talada haya ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaan PFD.
Xukuumadda Washington ayaa dhinacyadan Eritrean-ka ah ku eedaysay in ay taxaaluf layihiin dowladda Itoobiya ayna ku lug leeyihiin xasuuqa lagu hayo shacabka Qowmiyadda Tigreega.
Antony Blinken oo ah wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in maamulka Biden uu ciqaab marsiinayo laba shakhsi iyo iyo laba Urur oo Eritrean ah sababa laxiriira ku lug lahaanshiyahooda dagaalka Itoobiya.
Sidoo kale dowladda Mareykanka ayaa ugu goodisay xukuumadda Itoobiya in ay xayiraado kusoo rogi doonto haddii ay fashilmaan dadaallada diblumaasiyadeed ee ay wadaan madaxda ururka Midowga Afrika.
Dhinaca kale taliska ciidanka Mareykanka qaaradda Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa walaac ka muujiyay in ay burburto dowladda Itoobiya, Jeneraal American ah oo warbaahinta reergalbeedka lahadlay ayaa ka shanqariyay in ay ka baqayaan in burburka Itoobiya ay ka faa'iidaystaan khusuumta America ee qaaradda Afrika.
Nidaamka Abiy Axmed ayaa dowladaha reergalbeedka ku eedeeya in ay taageera siiyaan jabhadda TPLF islamarkaana ay xagal daacinayaan melleteriga Itoobiya.